जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन जोड्ने पाँच खेलाडी - नेपाल समय
जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन जोड्ने पाँच खेलाडी
एजेन्सी- इंग्ल्यान्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकपको क्रिकेटको सेमिफाइनल समिकरण पुरा भएको छ ।
सेसिमफाइन समिकरण पुरा भएसँगै सेमिफाइनमा स्थान बनाउने चार टोलीमात्र नभइ एक अर्काको सेमिफाइनल प्रतिद्वन्द्वीको समेत टुङ्गो लागेको छ ।
सहभागी १० टोलीले एक अर्कासँग ९ खेल खेले । जारी विश्वकपमा शीर्ष पाँच खेलाडीले पाँच सय रनको आँकडा पुरा गरेका छन् । हेरौ जारी विश्वकपमा लिग चरणका खेलहरुमा सर्वाधिक स्कोर बनाउने पाँच खेलाडी को को हुन् ।
भारतका ओपनर ब्याटसम्यान रोहित शर्मा जारी विश्वकपमा पाँच शतक प्रहार गर्ने एक मात्र खेलाडी हुन् । उनी विश्वकपकै इतिहासमा एकै प्रतियोगितामा सर्वाधिक शतक बनाउने पहिलो खेलाडी समेत हुन् । उनले पाँच शतक र १ अर्धशतक बनाउँदै ६४७ रन जोडका छन् ।
उनी जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने पहिलो खेलाडी पनि हुने । जारी विश्वकपका लिग चरणका खेल सकिदा रोहितले ९ खेल मध्यबाट ८ खेल खेल्दै ६७ चौका र १४ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
जारी विश्वकपमा आफ्नो पहिलो खेल दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध १२२ रनको अविजित पारी खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवामत गरेका रोहितले दोस्रो अष्ट्रेलियासँग ५७ रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए ।
त्यस्तै तेस्रो खेलमा पाकिस्तानविरुद्ध १४० रनेको शतकीय पारी खेल्दा अफगानिस्तानविरुद्ध भने १ रनमा मुजीव उर रहमनको बलमा बोल्ड आउट हुँदै पेभिलिएन फर्किएका थिए ।
वेस्टइन्डिजविरुद्धको खेलमा १८ रनमा मैदानबाट बाहिरिएका रोहितले इंग्ल्यान्डसँग १०२, बंगलादेशसँग १०४ र श्रीलंकाविरुद्ध १०३ रनको शतकीय पारी खेल्दै चार शतक पुरा गरेका थिए ।
२. डेभिड वार्नर (अष्ट्रेलिया)
अष्ट्रेलियाका ओपनर ब्याटिसम्यान डेभिड वार्नर जारी विश्वकपको लिग चरणको खेल सकिदा सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । उनले लिगका ९ खेलमा ६३८ रन जोड्दै सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा रहेका हुन् ।
जारी विश्वकपको एक खेलमा उनको सर्वाधिक रन १६६ रहेको छ । वार्नरले जारी विश्वकपमा ३ शतक र ३ अर्धशतक बनाएका छन्। त्यस्तै ६४ चौका र ८ छक्का समावेश छन् । उनले अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा जारी विश्वकपको सुरुवातन गर्दै ८९ रनको अविजित पारी खेलेका थिए ।
दोस्रो खेलमा वेस्टइन्डिजसँग ३ रनको पेभिलियन फर्किएका वार्नरले तेस्रो खेलमा भारतविरुद्ध ५६ रनको अर्धशतकीय पारी खेले । त्यस्तै पानकिस्तानविरुद्द १०७ रनेको शतकीय पारी खेल्दा श्रीलंकासँग २६ रनमा आउट भए ।
बंगलादेशसँग १६६ रनेको शतकीय पारी खेल्दा १४७ बलमा १४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि इंग्ल्यान्डसँग ५३ रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दा न्यसजिल्यान्डसँग १६ र दक्षिण अफ्रीकासँग १२२ रन शतकीय पारी खेले।
३. शाकिब अल हसन (बंगलादेश)
बंगलादेशका अलराउण्डर तथा तेस्रो नम्बरका ब्याट्सम्यान शाकिब अल हसन जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको तेस्रो स्थानमा छन् । विश्वकपको लिग चरणका ९ खेल मध्यबाट ८ खेल खेल्दै शाकिबले ६०६ रन जोडेका हुन् ।
उनले लिग चरणमा सर्वाधिक ६०६ रन जोड्न २ शतक र पाँच अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । उनले लिग चरणका ८ खेलबाट ६० चौका र २ छक्का प्रहार गरे । जारी विश्वकपको एकै खेलमा उनको सर्वाधिक स्कोर अविजित १२४ रनको छ ।
शाकिबले पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध ७५ रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए । उनले ८४ बलमा ८९ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै ७५ रनको पारी खेलेका थिए । त्यस्तै न्युजिल्यान्डसँगको खेलमा ६४ रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दा इंग्ल्यान्डसँगको तेस्रो खेलका १२१ रनको शतकीय पारी खेलेका थिए ।
उक्त खेलमा ११९ बल खेल्दै १२ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका थिए । वेस्टइन्डिजविरुद्धको खेलमा १२४ रनको अविजित पारी खेल्दा ९९ बलमा १६ चौका प्रहार गरे ।
त्यसपछि अष्ट्रेलियासँग ४१ रनको पारी खेल्दा अफगानिस्तानसँग ५१, भारतसँग ६६ र अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँग ६४ रनको अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ८ खेलमा ११ विकेट समेत लिएका छन् ।
४. आरोन फिन्च (अष्ट्रेलिया)
अष्ट्रेलियाका कप्तान आरोन फिन्च जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडीको चौथो स्थानमा छन् । उनले अष्ट्रेलियानका लागि ५०७ रन जोडेका छन् । लिग चरणका ९ खेलमा ५०७ रन जोड्दा फिन्चले २ शतक र ३ अर्धशतक बनाएका छन् । उनको ४७ चौका र १८ छक्का सामेल छन् ।
अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा ६६ रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै सुरुवात गरेका फिन्चले वेस्टइन्डिजविरुद्धको आफ्नो दोस्रो खेलमा ६ रनमा आउट भएका थिए । त्यस्तै भारतसँग ३६ जोड्दा पाकिस्तानसँग ८२ रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए ।
श्रीलंकासँगको खेलमा १५३ रनको शतकीय पारी खेल्दा १३२ बलमा १५ चौका र ५ छक्का प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि बैगलादेशसँग ५३ रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दा आयोजन इंग्ल्यान्डविरुद्ध शतकीय पारी खेले ।
न्युजिल्यान्डसँग ८ रनमा पेभिलिएन फकिएका फिन्चले लिगको अन्तिम खेलमा दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध मात्र ३ रन जोडेका थिए । उनले पाकिस्तानविरुद्ध बलिङ गर्दै १ विकेट समेत लिएका छन् ।
५. जोए रुट (इंग्ल्यान्ड)
इंग्ल्यान्डका अलराउण्डर जोए रुट जारी विश्वकप अन्तरगत सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडीको पाँचौ स्थानमा छन् । उनले लिगका ९ खेल खेल्दै २ शतक र ३ अर्धशतक बनाउँदै ५०० रन जोडेका हुन् । लिग चरणका ९ खेलमा रुटले ४७ चौका र १८ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध विश्वकपको सुरुवात गर्दै ५१ रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका रुटले दोस्रो खेलमा पाकिस्तानविरुद्ध १०७ रनको शतकीय पारी खेलेका थिए । त्यस्तै वेस्टइन्डिजविरुद्ध १०० रनमा अविजित रहेका रुटले अफगानिस्तानविरुद्ध ८८ रनको अर्धशतकीय पारी खेले ।
श्रीलंकाविरुद्ध ५७ रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दा अष्ट्रेसिलयाविरुद्ध भने ८ रनमा पेभिलियन फकिएका थिए । भारतसँग ४४ र न्युजिल्यान्डविरुद्ध २४ रनको पारी खेलेका थिए । रुटले पाँच विकेट समेत लिएका छन् ।